Fahasalamàna · Novambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fahasalamàna · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Fahasalamàna tamin'ny Novambra, 2018
Kambodza 28 Novambra 2018
Nampiasa ny Aterineto mba hampahafantarana ny toe-piainany sy ny ady atrehany hitakiana ny zony ireo kambodziana mpivarotena.
Afrika: Manao laza masaka mikasika ny SIDA
Afrika Mainty 16 Novambra 2018
Maneho hevitra manoloana ny fanolorana ny SIDA ao Afrika sy ny fironana amin'ny fandisoana ireo tena isa i My Hearts in Accra, lahatsoratra nosoratan'i Ethan.
Libaney mpiasa matihaninana amin'ny fahasalamana, manameloka ny “Fitsaboana Fanovàna” ny LGBTQ+”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Novambra 2018
Ny fanentanan'ny vondrona HINAD dia tohiny tamin'ireo tatitra marobe nilaza fisian'ireo mitovy fananahana niharanà endrika samihafa mikasika ny fitsaboana famadihana sy noho ny antso nalefa tamin'ny taona 2017, avy amin'ny mpitsabo fitaovam-pananahana iray mba hampiasana ny fitsaboana amin'ny alalan'ireo herinaratra.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Novambra 2018
Azia Atsimo 12 Novambra 2018
Ghana: Ny tetikasa fandidiana hoditra
Afrika Mainty 07 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Martsa 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nanamarika tetikasa iray antsoina hoe “Ny Tetikasa Fandidiana Hoditra ao Ghana ” ny My Hearts in Accra. “Ny foibe ao Korle-Bu no foibe voalohany fandidiana hoditra sy famerenana amin'ny laoniny indray ny hoditra any Afrika Andrefana ary manampy ny...
Ghana: Fikarakarana Ara-pitsaboana
(Marihina fa tamin'ny volana May 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Niady hevitra momba ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ny fanjakana sy ny fitsaboana any amin'ny tsy miankina any Ghana ny Trials and Tribulations of a Freshyly Arrrive Denizen . .. Olona maro, anisan'izany ny tenako no nankasitraka ny ezaka atao...
Trinidad sy Tobago: Ny Fahasalaman'ny Praiminisitra
Karaiba 06 Novambra 2018
Taitra ireo vahoaka ao Trinidad sy Tobago omaly noho ny filazambaovao mikasika ny homamiadan'ny voa mahazo ny Praiminisitra Patrick Maning. Raha toa ka vitsy ireo blaogera no naneho hevitra ampahibemaso, tao anatin'ireo karajia manokana toy ny an'ny Facebook, nirehidrehitra ireo adihevitra mikasika ny vokatry ny toe-pahasalaman'i Manning.